तङकै आर्थिक बाटो हिंड्दैछन् ओली?
१५ चैत - अहिलेसम्म नेपालले चीनबाट खुद्रा परिमाणको मात्रै लाभ उठाइरहेको छ तर ठूलो अवसर भने भोटेकोशी बगे सरह व्यर्थ बगिरहेछ। चीनले ८ हजारभन्दा बढी वस्तुमा दिएको भन्सार सुविधाको भरपूर प्रयोग गर्न चुकेबाट नेपालले अवसर गुमाएको देखिन्न र?
स्वेच्छिक अवकाशः थोरै अभिशाप, धेरै अवसर
१४ चैत - नेपालको सन्दर्भमा समेत निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा रोजगारका अवसरहरुको पर्याप्तता नरहेको अवस्थामा सेवाबाट अवकाश लिएका कर्मचारीहरुले उमेरका आधारमा सक्रिय हुन सक्ने अवस्थामा नै निष्क्रिय जीवनयापन गर्नु पर्ने अवस्था सृजना हुनेछ।साथै कर्मचारीहरुले प्राप्त गरेको रकम समेत उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च नगरी...
भारत बाहेक अन्तबाट तेल ल्याउन संरचना फेर्नुपर्छ
९ चैत - नेपालमा इन्धनको माग दिन प्रति दिन बढ्न थालेकाले नेपाल आयल निगम पनि सचेत भएर भण्डारण क्षमता विस्तरमा लागेको छ। ९० दिनको भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्न हरेक प्रदेशमा भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्न निगम लागि परेको छ।
८ चैत - यो वाक्य तपाईं पुनः पढ्न सक्नुहुन्छ। इराकमाथिको आक्रमणलाई अमेरिकामा प्रायः ‘ठूलो गल्ती’ र अझ ‘भयानक गल्ती’ का रुपमा चर्चा गरिन्छ। वास्तवमा यो अपराध थियो।
१ चैत - एकाएक सृजना भएको असाधारण परिस्थितिमा सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशको कुर्चीमा झण्डै दुई महिना अगाडी पुगेका जोशी श्रीमानको भावी रोडम्यापले न्यायालयप्रतिको जनविश्वास र यसको भविष्य पनि निर्भर गर्नेछ।
१ चैत - वाम गठवन्धनको नयाँ सरकारलाई ‘चीनमैत्री’ को संज्ञा पनि दिइएकाले आपसी विकासको ‘केमेस्ट्री’ पनि मिल्नसक्ने प्रचुर संभावनाहरू छन्। यसबेला नेपालले पनि आफ्नो विकासमार्गको ‘गियर’ खिच्न सक्नेछ।
२७ फागुन - आजको क्षण, अहिलेको क्षण राजनीतिज्ञको हातमा होला। तर भविष्य राजनीतिज्ञको हातमा छैन, भविष्य शिक्षकको हातमा छ।
दलितलाई किन बनाइएन राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति?
२५ फागुन - दलित समुदायलाई भोट बैंकको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्दै आइरहेका वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी दुवै दलहरुले निर्वाचनमा समावेशी लोकतन्त्रको धज्जी उडाए। संघीय संसदको प्रत्यक्षतर्फ ३ जना मात्रै दलित निर्वाचित भए भने समानुपातिकबाट १६ जना पारिएको छ।
भारतसँग छिमेकी त्रसित रहुन् र प्रेम गरून्
२५ फागुन - प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो शपथ समारोहमा दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) का सबै नेताहरुलाई निम्त्याएर ‘छिमेकीलाई प्राथमिकता’ भनेर आफ्नो कार्यकाल सुरु गरेको लगभग चार वर्षपछि भारतको छिमेक नीति स्पष्ट रुपमा डामाडोल भएको छ।
संघीय संसदमा के विषय उठाउने?
२२ फागुन - जनप्रतिनिधिकाे रूपमा हामीसँग जनताका अपेक्षा धेरै छन्।
१९ फागुन - अहिले ‘ओली–गण’ भारतले ‘हामीलाई थापेको जाल ठूलो र राम्रो’ भनिरहेको छ। माछाले माझीदेखि तर्सने हो, जालको साइजको कुरा गर्ने होइन।
विश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’
ओली-प्रचण्डले लभ होइन, अरेन्ज म्यारिज गरे
१३ फागुन - केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सिद्धान्त नमिलेको होइन। सिद्धान्त मिलेको तर मिलेको कुरा भन्न नमिलेको मात्र हो।
अबकाे प्रस्थान बुद्ध, मार्क्स र अान्स्टाइनकाे बाटाेमा हुनुपर्छ
२३ फागुन - मातृभूमि नेपालबाट हजारौं माइल टाढा हिन्द र प्रशान्त महासागरको सीमामा अवस्थित प्राचीन सभ्यताको धनी टापू बालीमा उभिएर घोत्लिदा प्राप्त गरेका अनुभूतिहरू सबैसंग बाँड्ने अनुमति चाहन्छु।
के सोच्दैछन् ओली सरकारप्रति चीन र भारत?
९ फागुन - आजसम्म नेपाली मैदानमा खेल्न पाएको भारत पूर्ण रूपमा मैदानबाट हटाइँदा निराश भएर प्रतिशोधमा उत्रिन सक्छ भने आफ्नो पक्षधरको सत्ता आएको मौकामा चीनले पनि नियम मिचेर खेल्न सक्छ। तसर्थ भविष्यका संभावित दुई अतिवादलाई तुलोमा राखेर अबको सरकारले सन्तुलनको कदम चाल्नु हितकर हुन्छ।
५ फागुन - वीपीले भन्ने गरेको माटो र महेन्द्रले भन्ने गरेको माटोमा फरक छ। हो, यो माटोको फरक बुझ्न सकिएन भने फेरि पनि नेपाली माटो सुहाउँदो ‘कम्युनिज्म’ नेपालमा नेपाली माटो सुहाउँदो ‘पन्चायत’ जस्तो हुनेछ।
१ फागुन - उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उनकी बेहद आकर्षक बहिनी किम यो जोङले कोरिया युद्धयता दक्षिण कोरियामा पाइला टेक्ने सत्तासीन वंशको पहिलो सदस्य बनेर इतिहास रचिन्।
१८ माघ - यतिबेला नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन नयाँ उचाइमा पुगेको छ। दुई ठूला पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेबीचको एकीकरण प्रयासले मूर्त रुप लिन लाग्दा नेपाली जनता एवं आम कम्युनिस्ट शुभेच्छुकहरु उत्साहित हुनु स्वभाविक नै हो।
१५ माघ - नेपाली कांग्रेसको कुनै दोस्रो वा तेस्रो तहको नेतालाई एमालेले प्रधानमन्त्री बनाउँछु, मेरो पार्टीमा आउनुस् भन्यो भने ऊ पनि सरक्क एमालेमा जानेछ। र, नेपाली माटो सुहाउँदो एमालेको कुरा गर्न थाल्नेछ।
२८ पुस - जसलाई फेसबुकले शिष्ट भाषामा ‘इन्गेजमेन्ट’ भन्छ विशेषज्ञले त्यसलाई ‘लत’ का रुपमा व्याख्या गर्छन्। यही ‘इन्गेजमेन्ट’ जुकरबर्गले निकै जोड दिएर भन्ने गरेको मानिसको उन्नतिका लागि हानिकारक देखिन्छ। यद्यपि विगतमा तिनका उत्पादनको नोक्सानीबारे कुरा गर्दा क्रुद्ध हुने सिइओहरुभन्दा अलग जुकरबर्ग त्यस्ता...
१९ पुस - आफ्नो प्राकृतिक क्षमतालाई ध्यान दिएर अर्थव्यवस्थाका फरकफरक क्षेत्रमा उचित कार्यक्रमसहित अघि बढ्ने हो भने न्युजिल्याण्ड, स्वीट्जरल्याण्डजस्ता राष्ट्रहरुजस्तै नेपाल पनि एक आर्थिक शक्तिको रुपमा विश्व मानचित्रमा स्थापित हुन धेरै समय लाग्नेछैन।